China Kurapa yekuzvishandira-terminal terminal Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Quotation - Shenzhen JAK Medical Technology Co, Ltd.
Imba > medical self basa muchina medical self basa muchina > Chiremba anozvishandira-terminal
ekuzviriritira ekuzvishandira ma terminals neshenzhen jun ankang kambani uye neshenzhen chipatara chevanhu chekutsvagisa pamwe nekusimudzira, kugadzirwa, kwakakurumbira zvipatara uye munharaunda zvokurapa cheki-up yekuzvimiririra nzvimbo dzekupedzisira, inogona maererano nemunhu akasiyana kuti kurapwa cheki-up chinodiwa , kuzvibatsira-wega sarudzo yakasarudzika pakuongorora kwepanyama, rezinesi rekutyaira kubhidha kuongororwa, kurongedza mapakeji, akasarudzika uye anokurumidza kupedzisa chirongwa chekurapa. Zvakanyanya kuvandudza mashandiro ebasa redhipatimendi rekuongorora, uye gonesa kuongorora mamiriro epanyama muchipatara.
Chigadzirwa chigadzirwa: JAK-800M
Imwe-mira kuongorora kwepanyama wega-sevhisi yekupedzisira
JAK - 800Mzvipatara zvekuzvishandiranekambani yeShenzhen jun ankang uye chipatara chevanhu shenzhen chekutsvagisa pamwe nekusimudzira, kugadzirwa, kwakakurumbira zvipatara nezvivakwa zvekurapa-kuzviongorora zviteshi zvekuzviriritira, zvinogona maererano nemunhu akasiyana kuti kurapwa cheki-chinodiwa, kuzvibatsira kubatsira kungwara Sarudzo mukuongorora kwepanyama, rezinesi rekutyaira kubheja kunoongorora zvekurapa, zvakasarudzika zvekutarisa mapakeji, zviri nyore uye nekukurumidza kupedzisa chirongwa chekurapa Zvakakosha kugadzirisa basa rekushanda kwedhipatimendi rekuongorora, uye kugadzirisa mamiriro ekuongorora epanyama mune chipatara.Icho chakaiswa mune inoongorora yemuviri dhipatimendi yeShenzhen People's Hospital nemamwe masangano ekurapa, uye yanga ichirumbidzwa zvakanyanya.
1. Chigadzirwa chimwe chete chinogona kubatsira varwere kupedzisa zvese zvisina-kuongororwa uye nzira dzekurapa dzekuongorora panyama pachavo, uye chimiro, ma module anoshanda uye UI interface inogona kugadziridzwa.
Zvichienderana nemamiriro chaiwo echipatara, kubva pakuonekwa kusvika pakuonekera, kubva kumaharaware kusvika pabasa, kuti uwane zvakanyanya zvakagadziriswa.
3. Kuruboshwe uye kurudyi mativi anogona kuwedzerwa zvinoenderana nezviri kudiwa, izvo zvinogona kuona matatu-munhu mashandiro munzvimbo yakaganhurirwa nzvimbo uye nekuwedzera kukwidzirisa mashandisirwo enzvimbo enzvimbo zviwanikwa zvechipatara.
4, Tora ruviri skrini yekuratidzira, iyo yepamusoro ndiyo skrini yekuratidzira, pasi ndiyo yekubata skrini, tsigira mizhinji-yekubata, yakafanana neyakagunzwa ruzivo rwe smart phone.
5.Kunyatso kupfupisa daro repanyama pakati pemadhipatimendi anoshanda muchipatara, uye kudzikisa nguva yekumira kwevarwere mune zvisina-kuongororwa uye marapirwo emuchipatara.
Kunyoresa uye kubhadhara: kunyoresa kunyoresa, WeChat, Alipay nedzimwe nzira dzekubhadhara.
Mufananidzo uye dhinda
Tora gwaro rekuongorora muviri: tsigira A4, pepa A5 kuti uprinte mushumo wekuongorora.
Hot Tags: Medical firimuï¼ŒMedical printer ï¼ŒMedical self-service terminal, China, vagadziri, vatengesi, fekitori, yakagadzirirwa, mutengo, chitaurwa.